डेटिङ गएकी २१ वर्षीया युवतीले अपहरणमा परेको बाहानमा यस्तोसम्म गरेपछि…उड्यो सबैको होस — Sanchar Kendra
१कोरोनाको अर्काे लहर सुरु भएको भन्दै काठमाडाैंमा आजदेखि लागु भयो यस्तो नयाँ नियम, सबैले अनिवार्य पालन गर्नुपर्ने
२भारतमा एकैदिन झन्डै ३ लाखमा कोरोना संक्रमण, हजारौँको मृत्यु
३बिहानैदेखि आकाश धुम्म बनेका बेला मौसमसम्बन्धि आयो यस्तो ताजा अपडेट, हेर्नुहोस बिस्तृतमा
४आज रामनवमी पर्व, माडीमा सीतारामको मूर्ति स्थापना गरिँदै
५ओली सरकारले बल्ल दियो यस्तो कडा निर्देशन, जारी भयो सूचना
६थप १७३६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ११ को मृत्यु
७ओलीको कारवाहीपछि खनाल-नेपाल समूहले बोलायो सांसदहरुको आकस्मिक बैठक
८ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे मावोवादी केन्द्रले के गर्यो निर्णय ?
९उच्च स्कोरका बाबजुद पनि नेदरल्याण्डसंग हार्यो नेपाल
१०पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनकी पत्नी कोमललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि, के छ अवस्था ?
११नेपलामा फेरी बिहिबारदेखि लकडाउन सुरु हुँदै
१२नेपालले नेदरल्याण्डलाई दियो २०७ रनको विशाल लक्ष्य
डेटिङ गएकी २१ वर्षीया युवतीले अपहरणमा परेको बाहानमा यस्तोसम्म गरेपछि…उड्यो सबैको होस
भनिन्छ प्रेम अन्धो हुन्छ । अर्थात प्रेममा पर्नेहरु जुनै हदसम्म जान पनि तयार हुन्छन् । प्रेममा पर्नेहरु घरमा झुट बोलेर बाहिर भेट्ने, भागेर जाने वा अनेकौं अप्ठेराहरुको सामना गर्न पछि पर्दैनन् ।
अभिभावकलाई छलेर डेटिङमा जानेहरु पनि धेरै हुन्छन् । तर भारतकी एक युवतीले भने प्रेमीसंग घण्टौ डेटिङमा रहेको बताउन नसकेर अभिभावकलाई आफू अपहरणमा परेको बाहान बनाएको खबर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ ।
जसका कारण प्रहरी प्रशासन सहित अपराध शाखामा समेत हंगामा भएको थियो । भारतको नागपुरकी २१ बर्षिय एक युवती आफ्नो प्रेमीका साथ डेटिङ लामो समय डेटिङमा थिइन् ।
ढिलो घर पुगेपछि परिवारका सदस्यले उनलाई ढिलो आउनुको विषयमा केरकार गर्न थाले । उनले आफू डेटिङमा रहेको बताउन सकिनन् र आत्तिदै कलेजबाट फर्कदा चारजना पुरुषको समुहले अपहरण गरेको र त्यहाँबाट भाग्न सफल भएको बताइन् ।
युवतीका परिवारजनले तत्काल गिट्टीखदान प्रहरी चौकिमा छोरी अपहरणमा परेको निवेदन दिए । युवती अपहरणमा परेको निवेदन परेपछि प्रहरीले बेलुकी ८ बजेबाट हरेक नाकामा प्रहरीले सक्रियता बढायो । तर अपहरणकारीको कुनै सुराक पत्ता लगाउन सकेन ।
घटना गम्भिर भएको भन्दै प्रहरीले थप सहायता माग्यो र अपराध शाखाको टोली समेत अपहरणकारीको खोजीमा जुट्यो । प्रहरीले ति युवतीलाई अपहरणमा परेको स्थानमा पुर्याउन अनुरोध गरे ।
युवतीले पनि मनगणन्ते स्थानमा पुर्यायएर सो स्थानबाट आफू अपहरित भएको बयान दिइन् । युवतीको बयान अनुसार प्रहरीले रातभर अपहरणकारीको खोजी गरे । तर पत्ता लगाउन सकेनन् ।
अब प्रहरीलाई युवतीमाथि नै शंका भयो । तब उनीहरुले कलेजका आसपासमा रहेको सीसीटिभी फुटेज जाँच गरे । जहाँ युवती एक युवकका साथ मोटरसाइकलमा सवार भइ गएको देखियो ।
जब सीसीटिभी फुटेज बाहिरियो तब मात्र युवतीले अपहरणमा परेको कहानी झुटो भएको स्वीकारिन् । प्रहरीका अनुसार उनी कलेजबाट आफ्नो प्रेमीका साथ डेटिङ गएकि थिइन् । डेटिङमा लामो समय बिताएपछि उनका प्रेमीले ती युवतीलाई घरअघि सम्म पुर्याएका थिए । यसरी घण्टौ डेटिङमा रहेको कारण परिवारजनले गाली गर्ने भन्दै त्यसबाट बच्न उनले आफू अपहरणमा परेको झुटो कहानी सुनाएकी थिइन्
चिटिक्क जिउडाल, धपक्क बैंस तरपनि विवाह गर्ने पुरुष नपाएर हैरान । यो पीडा सिरियाका युवतीहरुको हो । जहाँ पुरुषको अभावमा युवतीहरु विबाह नभएर पीडामा बस्न बाध्य छन् । किन आइलाग्यो त यो समस्या ?
समाचार माध्यममा जनाइएअनुसार, लामो समयदेखि हिंसाग्रस्त सिरियामा ७० प्रतिशत महिला अविवाहित छन् । हिंसाका कारण कयौं युवक मारिएका छन् भने कयौं विदेश पलायन भइसकेका छन् ।
त्यस्तै कतिपय युवक जेलमा छन् । जसका कारण विहे गर्ने बेलाका युवकहरुको खडेरी नै छ । केही समय अघि गरिएको अध्ययन अनुसार, त्यहाँ ७० प्रतिशत महिला पुरुष नपाएर अविवाहित बस्नु परेको छ ।
समाजमा बचेखुचेका केही युवक पनि आर्थिक समस्या, असुरक्षाजस्ता कारणले विवाहका लागि तयार हुदैनन् । यसले गर्दा समस्या परिरहेको छ।
समुद्रबाट निस्कियो यस्तो अनौठो जीव, रुखको जराजस्तै आकार भिडियोसहित